Ra’iisul Wasaare Cuma Cabdrishiid Cali ayaa dhagax dhigey dib u dhis lagu sameynayo safaarada ay dowlada Soomaaliya ku leedahay magaalada Nairobi(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharma’arke iyo Safiirka Dowlada Soomaaliya u fadhiya Dalkani Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa maanta si wada jir ah u dhagax Dhigay dib u dhis lagu sameynayo safaaradii ay dowlada Soomaaliya ku Lahayd deegaanka Weslands ee magaalada Nairobi.
Dhax Dhigga safaarada ayaa waxaa ka soo qeyb galay xubno ka tirsan labada gole ee dowlada Soomaaliya,Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe), Qunsulka Safaarada Cali Maxamed Shiikh Cali(Begadi) ganacsato iyo waxgarad.
Fatxudiin Cali Maxamed oo ah madaxa gudiga ganacsatada Soomaaliyeed ee dib u dhiska ku sameynayo safaarada ayaa sheegay in ay garteen in ay dib u dhisaan safaarada oo ah guriga shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalkani Kenya.
Fatxudiin ayaa sheegay in din u dhiska safaarada ay ku baxeyso lacag dhan hal Milyan oo doolar,waxana uu sheegay in dhismaha safaarada lagu soo gabagabeyn doono mudi afar bilood ah,shacabka soomaaliyeed ayuuna ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan.
Danjiraha Dowlada Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa u mahad celiyay safiirkii ka horeeyay Maxamed Cali Nuur Ameriko iyo shaqaalaha safaarada oo dadaal dheer dib ku guuleystay dib u soo celinta safaarada oo in mudo ah uu haystay nin u dhashay dalka Hindiya.
Danjire Jamaal ayaa sheegay in dhismaha safaarada ay u saareen gudi ganacsato ah oo bilaabaya dib u dhiskeeda,waxanauu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan dib u dhiska safaarada.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe) ayaa u mahad celiyay dadkii soomaaliyeed ee ka qeyb qaatay dib u soo celinta safaarada,waxana shacabka soomaaliyeed uu ugu baaqay in gacan ka geystaan sidii safaaradan dib loogu dhisi lahaa.
Ganacsatadii Soomaaliyeed ee ka soo qeyb gashay dhagax dhigga safaarada ayaa sheegtay in ay diyaar u yihiin ka qeyb qaadashada dib u dhiska safaarada.
Ugu danbeyntii Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharma’arke ayaa sheegay in gurigan ay leedahay ummada Soomaaliyeed,iyadana loogu adeegayo,waxana uu u mahad celiyay ganacsatadii uruurisay lacagta lagu bilaabayo dhismaha safaarada,isagoo ugu baaqay ganacsatada kale in ay ka qeyb qaatan.
Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in xukuumada uu madaxda ka yahay ay ka qeyb qaadan doonto dib u dhiska safaarada.
Danjirihii hore ee dowlada Soomaaliya u fadhiyay dalkani Kenya Maxamed Cali Nuur Ameriko iyo shaqaalaha Safaarada ayaa dhamaadkii sanadkii 2010 ku guuleystay in gacanta dowlada Soomaaliya uu ku soo celiyo safaaradan oo in mudo ah uu haystay nin u dhashay dalka Hindiya.
Guddoomiyaha Gobalka Banadir ayaa maanta la kulmay dhammaan shaqaalaha Dowladda Hoose ee Xamar